အလုပ် မြန်မာ - မြန်မာနိုင်ငံသားများအတွက် လုံခြုံရေးဝန်ဆောင်မှု အလုပ်အကိုင်များ
သတင်းအချက်အလက်နည်းပညာနှင့် ကွန်ပျူတာ 4
လက်ဝတ်ရတနာနှင့် ကျောက်မျက်ရတနာလုပ်ငန်း 4
အလုပ် 38 ခုရှာတွေ့ပါသည်။
Recruiter active 21 mins ago The recruiter at this company was last active reviewing applications.
-နေ့ဆိုင်း ညဆိုင်း မရွေး တာဝန်ကျရာနေရာများသို့ သွားရောက်တာဝန်ထမ်းဆောင်နိုင်ရမည်။ - မြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရမှ ပြဌာန်းထားသော အလုပ်ချိန်အတိုင်းသာ တာဝန်ထမ်းဆောင်ရမည်ဖြစ်ပြီး အစိုးရရုံးပိတ်ရက်များနှင့် အချိန်ပိုတာဝန်ထမ်းဆောင်ရသော အချိန်တိုင်းအတွက် အချိန်ပိုကြေးအား ဥပဒေနှင့်အညီ ခံစားခွင့်ရရှိမည်ဖြစ်သည်။
တင်သောနေ့: 19 Nov 2021
-နေ့ဆိုင်း၊ ညဆိုင်း ခွဲကာ တာဝန်ထမ်းဆောင်နိုင်ရမည်။
- လုံခြုံရေးနှင့်ပတ်သက်၍အတွေ့အကြုံရှိရမည်။ -လုပ်ငန်းသဘောသဘာဝအရ ကျန်းမာသန်စွမ်းပြီး နေ့၊ ည အလှည့်ကျ စနစ်ဖြင့် တာဝန်ထမ်းဆောင် နိုင်သူ ဖြစ်ရမည်။
လုံခြုံရေး (၅၀) ဦး
နေ့ဆိုင်း ညဆိုင်း တာဝန်ထမ်းဆောင်နိုင်ရမည် ဧည့်သည့် အဝင်အထွက် စားရင်းမှတ်ရမည် လုံခြုံရေးနဲ့ ပက်သက်သော ကိစ္စအဝအဝ ကိုတာဝန်ယူရမည်
တင်သောနေ့: 10 Nov 2021
နေ့စဉ်တာဝန်ကျဇယားအတိုင်း တာဝန်ထမ်းဆောင်ရမည်။ တာဝန်ကျရာနေရာသို့ တာဝန်လွှဲပြောင်းချိန်မတိုင်မီ ကြိုတင်ရောက်ရှိရ မည်။ လုံခြုံရေးဝန်ထမ်းအသစ်/အဟောင်းသည် စာရွက်စာတမ်း၊ ပစ္စည်းပစ္စယများကို ကြည့်ရှုစစ်ဆေးပြီးမှ လွှဲပြောင်း/လက်ခံပြုရမည်။ တာဝန်ချိန်ဇယားတွင်ပါရှိသည့်နေရာနှင့် အချိန်တိုင်းတွင် ကုမ္ပဏီနှင့်ပတ်သက်သော ပစ္စည်းလုံခြုံရေး၊ ဝန်ထမ်းလုံခြုံရေး၊ သတင်းနှင့်စာရွက်စာတမ်းလုံခြုံရေးတို့ကို တာဝန်ယူရမည်။ ကုမ္ပဏီနှင့်ဝန်ထမ်းများ၏လုံခြုံရေးကို ဘေးဥပါဒ်ဖြစ်စေမည့် အကြောင်းအရာမှန်သမျှကို အစဉ်သတိ ဖြင့် စောင့်ကြည့်ရမည်။ ပြင်ပဝန်ထမ်းနှင့်ဧည့်သည်များလာရောက်ပါက ယဉ်ကျေးစွာမေးမြန်းခြင်း၊ သက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူထံ သတင်းပို့ခြင်း၊ တာဝန်ရှိသူနှင့်မတွေ့ဆုံပါက ၎င်းဧည့်သည်၏လာရောက်သည့်အကြောင်းအရာ၊ ဖုန်း နံပါတ်၊ အချက်အလက်တို့အား မေးမြန်းရမည်။ တာဝန်အရစစ်ဆေးမေးမြန်းရာတွင် ယဉ်ယဉ်ကျေးကျေးဖြင့်လိုရင်းကို စစ်ဆေးမေးမြန်းခြင်းပြုရမည်။ တာဝန်အရ စစ်ဆေးမေးမြန်းသည်ကို မချေမငံပြုမူခြင်း၊ ရိုင်းပျစော်ကားခြင်းပြုပါက ပြုလုပ်သူကို မှတ်တမ်းတင်၍ တာဝန်ရှိသူထံ ချက်ချင်းသတင်းပို့ရမည်။ ပြင်ပမှရောက်ရှိလာသောစာများကို ဖောက်ဖတ်ခြင်း၊ ဖြန့်ဝေခြင်းမပြုဘဲ မှတ်တမ်းတင်၍ သက်ဆိုင်ရာ တာဝန်ခံထံ ချက်ချင်းသတင်းပို့ရမည်။ ခြံစည်းရိုးများ၊ အုတ်တံတိုင်းများ၊ အကာအရံနှင့်ဝင်ပေါက်/ထွက်ပေါက်များကို အချိန်တိုင်းကြည့်ရှု စစ်ဆေး၍ ပျက်စီးမှုရှိက တာဝန်ခံထံ ချက်ချင်းသတင်းပို့ရမည်။ ယာဉ်ဝင်/ထွက်တိုင်း သက်ဆိုင်ရာမှတ်ပုံတင်စာအုပ်တွင် မှတ်တမ်းတင်ထားရမည်။ မီးဘေးလုံခြုံရေးကို အထူးဂရုပြုစောင့်ကြပ်ထိန်းသိမ်းရမည်။ ထူးခြားဖြစ်စဉ်ပေါ်ပေါက်တိုင်း တာဝန်ရှိသူများကို အချိန်နှင့်တပြေးညီ သတင်းပို့ခြင်း/ မှတ်တမ်းတင် ခြင်းပြုလုပ်ရမည်။
Recruiter active 15 mins ago The recruiter at this company was last active reviewing applications.
CCTV များဖြင့် စစ်ဆေးရန် တာဝန်ပေးထားသည်။ နှစ်နာရီတစ်ကြိမ် ညဆိုင်း လေးကြိမ် စစ်ဆေးရန်။
အကျိုးအမြတ်: *Meal allowance *Ferry provided
(က) အနည်းဆုံး အခြေခံပညာ အလယ်တန်းအဆင့်ရှိသူ ဖြစ်ရမည်။ (ခ) လုပ်ငန်းသဘောသဘာဝအရ ကျန်းမာသန်စွမ်းပြီး နေ့၊ ည အလှည့်ကျ စနစ်ဖြင့် တာဝန်ထမ်းဆောင် နိုင်သူ ဖြစ်ရမည်။ (ဂ) အသက် (၁၈ - ၄၅) နှစ်အတွင်း လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံရှိသူ ဦးစားပေးမည်။ (ဃ) အကျင့်စာရိတ္တကောင်းမွန်၍ ပေးအပ်သည့် တာဝန်ကို ကျေပွန်စွာထမ်းဆောင်နိုင်သူ ဖြစ်ရမည်။
- ဟိုတယ်၊ ဧည့်သည်များ၊ ဝန်ထမ်းများနှင့် ဟိုတယ်များ၏ လုံခြုံရေးနှင့် လုံခြုံမှုကို ဂရုစိုက်ရန်၊ လုံခြုံရေးဆိုင်ရာ ထိန်းကျောင်းမှုဆိုင်ရာ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင့်အညီ ဆောင်ရွက်ပေးခြင်း။ - (အစီရင်ခံခြင်း)း - ဟိုတယ်မူဝါဒများနှင့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကို ထိန်းသိမ်းထာပြီး လုံခြုံရေးအဖွဲ့၏စွမ်းဆောင်ရည်ကို မြှင့်တင်ရန်နှင့် တိုးတက်စေရန် လုံခြုံရေးမန်နေဂျာအား အကြံပြုပေးခြင်း - (အတွင်းပိုင်း) လုံခြုံရေးဧရိယာနှင့်ပတ်သက်သည့် မည်သည့်အချက်အလက်ကိုမျှ မဖော်ပြရန်နှင့်။ - ဟိုတယ်သို့ ကျူးကျော်သူမှန်သမျှကို သင့်လုံခြုံရေးကို မထိခိုက်စေဘဲ ရဲတပ်ဖွဲ့ များအား ကြိုးစားဆက်သွယ် ဆောင်ရွက်နိုင်ခြင်း - လုံခြုံရေးဌာနနှင့် ဟိုတယ်စီမံခန့်ခွဲရေးတို့ကြား ပုံမှန်သတင်းအချက်အလတ်များ ဂရုစိုက်တစိုက်ထားရှိခြင်း။ - (အပြင်ပိုင်း) လုံခြုံရေးဝန်ထမ်းများသည် ပါမစ်ဝင်ရောက်ခြင်းမပြုမီ ၎င်းတို့၏ ID ကတ်များကို အပ်နှံရန်နှင့် ဧည့်ဝင်ခွင့်လက်မှတ်ထုတ်ပေးရန် ဆောင်ရွက်ပေးခြင်း။ - ဧည့်သည်များ အလုပ်ပြီးသောအခါ ၎င်းတို့၏ ID ကတ်များကို လဲလှယ်ပေးခြင်း။
အကျိုးအမြတ်: Uniformယ Duty Meal စွမ်းဆောင်ရည်အတွက် ဆုလာဘ်များ
ကျန်းမာရေးကောင်းမွန်ပြီး သွက်လက်စွာ လုပ်ကိုင်နိုင်ရမည်။ အသောက်အစားကင်းပြီး နေ့ည အဆိုင်းဖြင့် လုပ်ကိုင်နိုင်ရမည်။ ရိုးသားပြီး ချမှတ်ထားသော စည်းကမ်းများကို လိုက်နာနိုင်ရမည်။ လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံရှိသူကို ဦးစားပေးမည်။
- ဖြန့်ချိရေးကုမ္ပဏီတွင်လုပ်ကိုင်ရမည်။ - လုံခြုံရေးနှင့်ပတ်သက်၍အတွေ့အကြုံရှိရမည်။
Recruiter active 31 mins ago The recruiter at this company was last active reviewing applications.
Security (Car Parking)
- လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံရှိသူဦးစားပေးမည်။ - ရိုးသားကြိုးစားပြီး ၊လူမှုဆက်ဆံရေးကောင်းမွန်၍ အသင်းအဖွဲ့နှင့် လိုက်လျောညီထွေစွာ လုပ်ကိုင်နိုင်သူဖြစ်ရမည်။ - အကျင့်စာရိတ္တကောင်းမွန်ပြီး၊ ပြစ်မှုကင်းရှင်းသူဖြစ်ရမည်။ - လုပ်ငန်းအပေါ်စိတ်ပါဝင်စားပြီး၊ စေ့စပ်သေချာစွာလုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်တက်သူဖြစ်ရမည်။
အကျိုးအမြတ်: * အပိုဆု + ဝန်ဆောင်ခများ
-နေ့/ည အလှည့်ကျတာဝန်ထမ်းဆောင်နိုင်ရမည်။ -အရက်သေစား‌သောက်စား တတ်သူများလျောက်ထားရန်မလို။ -လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံရှိလျင်ဉီးစား‌ေပးခန့်ထားမည်။ -ပြောဆိုဆက်ဆံရေး ပြေပြစ်ရမည်။
တင်သောနေ့: 30 Oct 2021
Super Shine Trading
- ကျန်းမာရေးကောင်းမွန်သူဖြစ်ပြီး နေ့/ည တာဝန်ထမ်းဆောင်နိုင်သူဖြစ်ရမည်။ - အသောက်အစားကင်းစင်၍ အလုပ်ကိုစိတ်ပါဝင်စားသူဖြစ်ရမည်။ (ယောကျ်ားလေးသာ ည တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန်)။
အသက် (၂၅-၄၅) နှစ် ဖြစ်ရမည်။ အထက်တန်းထိပညာသင်ဖူးသူဖြစ်ရမည်။ ကျန်းမာရေးကောင်း၍ဖြတ်လက်သွက်လက်ပြီး အသောက်အစားကင်းရမည်။ အသင်းအဖွဲ့နဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်သူဖြစ်ရမယ် နေ့/ည ဂျူတီဆင်းနိုင်သူဖြစ်ရမည်
အကျိုးအမြတ်: အခြေခံလစာ ရက်မှန်ကြေး other Allowance
- နေ့ဆိုင်း၊ညဆိုင်းအလှည့်ကျဆင်းရပါမည် -အလုပ်ချိန်အတွင်း တက် ကြွလုပ်ကိုင်နိုင်သူဖြစ်ရမည်
E-Outfitting Hotel Group
အခြေခံပညာ အထက်တန်းအဆင့်ရှိသူ Security Guard ရာထူးဖြင့် လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ အနည်းဆုံး (၁) နှစ် ရှိရမည်။ အသက် (၃၀) နှစ် အထက်ရှိပြီး ရိုးသားကြိုးစားသူ ဖြစ်ရမည်။ အကျင့်စာရိတ္တကောင်းမွန်ရမည်။
အမျိုးသား လုံခြုံရေး - Security
လမ်းမတော် | ရန်ကုန်တိုင်း . ရန်ကုန်တိုင်း .
တာဝန်ကျရာနေရာ၏ လုံခြုံရေးအား အလေးထား ဆောင်ရွက်ရမည် တာဝန်ချထားသော အဆိုင်း (နေ့/ည)အတိုင်း မငြီးမငြူ ထမ်းဆောင်နိုင်ရမည် ရိုးသားကြိုးစားသူဖြစ်ရမည် ကျန်းမာသန်စွမ်းပြီး လုံခြုံရေးနှင့် ပက်သက်သော တာဝန်များကို တာဝန်ကျေပွန်စွာ ထမ်းဆောင်းနိုင်ရမည်